Yile ndlela i-Apple Music Voice isebenza ngayo, isicwangciso esitsha se-€ 4,99 kuphela | Iindaba ze-iPhone
Yile ndlela i-Apple Music Voice isebenza ngayo, isicwangciso esitsha se-€ 4,99 kuphela
ULuis Padilla | | Apple Music, iOS 15
Ngokufika kwe-iOs 15.2, isicwangciso esitsha se-Apple Music siya kufika. Ibizwa ngokuba yi "Apple Music Voice", nge-euro eyi-4,99 kuphela isivumela ukuba sonwabele yonke ikhathalogu yoMculo weApple nangona ngendlela eyahlukileyo kunesiqhelo. Sichaza indlela esebenza ngayo.
1 Indlela yokuyiqesha
2 Zeziphi izixhobo ezinokusetyenziswa
3 Iquka ntoni umculo
4 Ilawulwa njani
5 Apple Music Voice imida
6 Iya kufumaneka nini
I-Apple Music inokufumaneka ikhontrakthi rhoqo ukusuka kwisicelo soMculo we-Apple kwaye iya kuxabisa kwi-4,99 €. Okwangoku ayiqukwanga kuyo nayiphi na iphakheji ye-Apple One, kwaye le nto ayilindelekanga ukuba ifike nangaliphi na ixesha kungekudala. Umbono kukuba sisicwangciso esingabizi kakhulu soMculo weApple kwabo bafuna ukonwabela esi sicwangciso sokumamela umculo rhoqo usebenzisa ilizwi labo, oko kukuthi, ngeSiri. Abo bangazange bazame i-Apple Music baya kukwazi ukuyonwabela iinyanga ezi-3 simahla, njengelingo, emva koko baya kuqala ukuhlawula umrhumo wenyanga we-4,99 €.
Zeziphi izixhobo ezinokusetyenziswa
Ungonwabela uMculo weApple kuso nasiphi na isixhobo esineSiri. Oku kuthetha ukuba Ungayisebenzisa kwi-iPhone yakho, i-iPad, iPod touch, iMac, iHomePod, iHomePod mini kunye neApple TV. Ewe kunjalo, inokusetyenziswa ngezixhobo ze-Apple, ezinje ngee-AirPods, ukuba nje ziqhagamshelwe kwisixhobo se-Apple esinoqhagamshelo lwe-intanethi, nakwiCarPlay.
Iquka ntoni umculo
I-Apple Music Voice ibandakanya yonke ikhathalogu yomculo weApple Music, ngaphandle kwezithintelo. Malunga nezigidi ezingama-90 zeengoma ziya kuba sezandleni zakho zokumamela naphi na naphi na apho ufuna khona. Uya kuba nokufikelela kwirediyo yoMculo yeApple. Iingcebiso zomculo zibandakanyiwe kwisicelo soMculo, kwaye uya kuba noluhlu lomculo wamva nje odlalwayo.
Ulawulo lokudlala lugqityiwe, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwesithintelo. Uya kukwazi ukusuka kwingoma ukuya kwingoma ngaphandle komda, akufani nezicwangciso zamahhala zezinye iiplatifomu ezingakuvumeli ukuba wenze isigqibo malunga nento oyimamelayo kunye nento ongayithobeliyo. Kananjalo ayibandakanyi intengiso yalo naluphi na uhlobo. Ewe ngokunjalo, ulawulo kufuneka lusoloko lwenziwa ngeSiri, awuzukwazi ukusebenzisa ulawulo lwekhusi lwesicelo, kukuphela komda walo. Ukuba uzama ukusebenzisa ulawulo oluqhelekileyo, kuya kubonisa ukuba akunakwenzeka, kwaye kuya kuphakamisa ukuba uye kwisicwangciso esipheleleyo.
Apple Music Voice imida
Ukongeza kokungakwazi ukusebenzisa ulawulo oluqhelekileyo kunye nokuhlala usebenzisa iSiri ukulawula uMculo weApple, kukho ezinye izinto esingakwaziyo ukufikelela kuzo. Awuyi kukwazi ukumamela umculo kumgangatho ophezulu (ngaphandle kwelahleko) kwaye asizokwazi ukusebenzisa iSpatial Audio.. Kwaye asinakukhuphela umculo ukuze siwumamele ngaphandle kweintanethi, ngaphandle koqhagamshelo lwe-intanethi. Asiyi kuzifumana iividiyo zomculo, okanye amazwi eengoma, yaye asiyi kukwazi ukubona ukuba abahlobo bethu baphulaphula ntoni. Ekugqibeleni, njengoko besitshilo ekuqaleni, inokuviwa kuphela kwizixhobo ezine-Siri, ngoko ke ayifumaneki kumaqonga ngaphandle kwe-Apple, njenge-Android okanye iWindows.
Iya kufumaneka nini
Apple Umculo Voice iya kuza kunye ne-iOS 15.2, ngokuqikelelwa kwiveki ezayo. Iza kufumaneka eSpain naseMexico, kunye neUnited States, iOstreliya, iOstriya, iKhanada, iTshayina, iFransi, iJamani, iHong Kong, iIndiya, iIreland, iItali, iJapan, iNew Zealand, iTaiwan neUnited Kingdom.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » Yile ndlela i-Apple Music Voice isebenza ngayo, isicwangciso esitsha se-€ 4,99 kuphela
I-WhatsApp sele ikuvumela ukuba uthumele kwaye ufumane imali kwi-cryptocurrencies e-US
Kwakhona iinyanga ezi-2 zasimahla zoMculo weApple enkosi kuShazam